ပြဇာတ် | Web Oficial berekekê
၁။ တင့်တယ်သောကျောက်တုံး ၂။ Natalia ၃
၇။ Ethereal ၈။ Shaman ၉။ နှိပ်စက်ခံရတဲ့ကလေးအတွက်သီချင်း
1. လက်စွပ် (အဖွင့်) 2. dancer 3. မီးခွက် 4. ကြောင် 5. တောင်တန်း
၆။ လိပ်ပြာ ၇။ သံTheာ ၈ ။ လက်စွပ် (အနီး)
၁။ ပန်းထိမ်သမားတစ် ဦး ။ မြစ်ချောင်းတစ်လျှောက်အတွက်လျှောက်လွှာတင်သူ ၃။ လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်း ၄။ Moguer ၅ ။
ဒီတော့ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ... 2.008
1. Altea 2. Aphrodite 3. Hermes 4. Mars 5. Charon 6. Medusa 7. Dionysus 8. Muses 9. Amazon ။ Calypso 11. Echo 12. Momo
၁။ Comanche မြင်း ၂ ။ မီးခိုးအချက်ပြ ၃။ Tipi ၄။ ငြိမ်းချမ်းခြင်းပိုက် ၅။ Winnemuca ၆ ။ ခိုးယူခံရသောလင်းယုန် ၇ ။
1. Nocturnal 2. စားသုံးမှု 3. Granadilla 4. Asnography 5. တစ္ဆေ 6. နွားများ 7. Sarito 8. Laurel လွမ်းသူ့ပန်းခွေ 9. Grana ရှုခင်း 10. ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 11. Coin Olinos ၏အပြောင်းအလဲ
ကွင်းဆင်းမှတ်စုစာအုပ်: ရွှံ့၊ မြစ်နှင့်ပင်လယ် ၂.၀၁၁
. Equilibrios de un mirlo acuático 2. Tejedora en agua 3. Historia de creta
၁ ။ ၁၀။ Fingal ဂူ ၁၁
၁၂။ အိမ်တစ်လုံးကိုရှာဖွေခြင်း Otter ၁၃။ လေနှင့်ပင်လယ်စကားဝိုင်းများ 14. Marismeña carpet
၁။ Granny (Red Red Riding Hood) ၂။ စစ်သားတစ် ဦး ၏ခရီးစဉ် (The Tin Soldier) ၃ ။ Sleep ... (Sleeping Beauty)
၄ ။ (Aladdin) ၅။ Constancia (ယုန်နှင့်လိပ်) ၆။ တံမြက်စည်း၏ Waltz (စင်ဒရဲလား)
(၇) လူလတ်တန်းစားများ၏မတ်လ (အဖြူရောင်နှင်းနှင့်လူရွှင်တော် ၇) ၈ ။ ကွဲပြားမှုရှိခြင်း (အရုပ်ဆိုးသည့်ငှက်) ၉ ။
12. Noel ၁၃။ ခရစ်စမတ်စိတ်ဓာတ် ၁၄ ။ Din Din လက်ဆောင် ၁ ၁၅ ။ အပြောင်းအလဲဘုရင်များလာနေပြီ ၁၆ Din ဆုလက်ဆောင် ၂ ၁၇ Snowman 18. အိပ်မက်အိတ်
၁၉။ Irmã Dulce ၂၀။ Juana Jugán - ခိုလှုံခွင့်၏အလင်း ၂၁ ။
၂၂။ ကတ္တားကက်ထရီဇာ (၂၃) မိခင်မာရီယာဒီလာရီရီဆာမာ - Villanueva del Ríoဂူများ။ ၂၄ ။
Hojyo Takashi 2.012 ၏ကမ္ဘာ
၁။ နဂါးအပေါ်စုန်းမ၊ ၂။ တယောသမား ၃ ။
အဆိုပါ Quartets 2.012
1. Quartet ဌ 1st mov ။ 2. Quartet 1 2nd mov ။ 3. Quartet 1 3rd mov ။ 4. Quartet21st mov ။ 5. Quartet22nd mov ။ 6. Quartet23rd mov ။ 7. Quartet31st mov ။ 8. Quartet32nd mov ။ 9. Quartet33rd mov ။ 10. Quartet41st mov ။ 11. Quartet42nd mov ။ 12. Quartet43rd mov ။
ပြန်လည်ရယူခြင်း: ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဂီတ ၁၀ နှစ်
၁။ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ၂။ စက္ကူပေါ်ရှိအရှေ့တိုင်းအနုပညာ ၃။ Andalusian မြည်းတစ်ကောင် ၄။ ထူးဆန်းသောလင်းယုန် ၅ ။
လူ့မိုက်မဲမှုအတွက် Suite 2013
၁။ နိုင်ငံတော်ကိုလက်ခံခြင်း ၂။ သမိုင်းဆိုင်ရာအလှည့်အပြောင်း ၃။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတော်သီချင်း ၄။ ကျွန်ုပ်၏မဟာမိတ်များဘယ်မှာလဲ။ ၅။ သိအောင်လုပ်ပါ။ var ။ လူကြိုက်များသောဆောင်ပုဒ် 6. Tombeau သို့မဟုတ် Numantine ယဇျပူဇျော
အဆိုပါ quartets vol ။2- 2,014
1. Quartet5Fadistas ငါ 2. Quartet5Fadistas II ကို 3. Quartet5Fadistas III ကို 4. Quartet6Sertaneja ငါ 5. Quartet6Sertaneja II ကို 6. Quartet6Sertaneja III ကို 7. Quartet7ငါ 8. Quartet7II ကို 9. Quartet7III ကို 10. Quartet 8 ငါ Polonaise 11. Quartet 8 II ကို Berceuse 12. Quartet 8 III ကို
၁။ Petrox စူးစမ်းရှာဖွေသူ ၂။ ပင်လယ်မှတွန်းလှန် 3. ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာပုလဲ 4. ဟောင်ကောင်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ၅ ။ ရေတံခွန်များ။
၈။ ဒေါသ ၉။ ဘုရင်သေပြီ
၉ မမေ့နိုင်သောအချိန်များ + ၁ ကလေးဘဝခံစားမှု ၂.၀၁၆
1. စက်ဘီးစီးခြင်း။ 2.Books နှင့် doodles 3. အားကစားသင်တန်းများ
4. မင်္ဂလာရှိသော bandurria ၅။ မြို့ငယ်လေးကိုအမှတ်ရခြင်း ၆။ အပန်းဖြေသောနေ့ရက်များ ၇
၈။ ဘုရားသခင်မရှိ ... ၉။ ဘုရားသခင်မရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ ၁၀ ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာငြင်းပယ်ခြင်း
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော MIRADORES 2.003 တည်းဖြတ်ခြင်း
တရုတ်အပိုင်းအစများ DELUXE 2.019
၁။ The Tsar's Mail ၂
၄။ အစ်ကိုနှင့်အစ်မ ၅။ Tomsk သို့သွားသောလမ်း ၆။ စတက်လွင်ပြင်စီး။ ၇။ Gipsy ၈။ မာဖါသို့မဟုတ်ရုရှားနိုင်ငံ
၁၂။ ကြေးနန်းအငြင်းပွားမှု ၁၃။ ဆိုက်ဘေးရီးယား Srenadeade 14 Marfa သို့မဟုတ်ရုရှားဇာတိမြေ (သံစုံတီးဝိုင်း)
ဗိသုကာ 2.020 အသစ်
၁။ Eiffel Tower ၂ ။ ချောကလက်အိမ် ၃ ။ Nerja ဂူများ
၄။ ဘုရားကျောင်း ၅။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၆။ ခန္ဓာကိုယ် ၇။ ပျားအုံများ ၈ ။
ဂီတသဒ္ဒဗေဒ 1.0 2.021 ကဗျာ
1. ဇာတ်သိမ်းဟောင်း၊ အစအသစ် 2. တောရိုင်းမိတ်သင်္ဂဟများ 3. Kinesthecimosis 4. Baleleando 5. ပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်း 6. ဟီရိုရှီးမားမှ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် 7. မိုးရေပုံစံ ထာဝရဝေဒနာ 8. အနက်ရောင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဂီတအသံထွက်ကဗျာ ၁.၀ ၂.၀၂၁
၁။ အဆုံး၊ အစအသစ်၊ ၂။ ရိုင်းပျသောသူငယ်ချင်းများ ၃။ Kinestechimosis ၄။ သေနတ်ပစ်ခြင်း ၅။ ပျင်းရိခြင်း ၆။ ဟီရိုရှီးမားမှမေတ္တာဖြင့် ၇။ မိုးပုံစံ၌ထာဝရနာကျင်မှု
(*) ဤဘာသာပြန်ချက်များကိုသတိထားပါ။ ၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်မူရင်းခေါင်းစဉ်နှင့်အတိအကျကိုက်ညီမှုမရှိပါ
© 2020 MIRADORES ထုတ်ကုန် 2.003 နှင့်